Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » ISpain Iindaba Eziphambili » Inkundla yaseSpain iyayala iklabhu yasebusuku i-COVID Pass Mandate
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Xanduva • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Inkundla yaseSpain iyala ukugunyazisa iklabhu yasebusuku
Inkundla ephakamileyo yaseAndalusia ikubona kufanelekile ukundwendwelwa kwezempilo ukuze undwendwele iindawo zasebusuku zangaphakathi ukuba zibe nocalucalulo kwaye ziphule amalungelo abucala abemi.
Cwangcisa ukwenza 'iipasipoti ze-COVID-19' ezinyanzelekileyo ukuba undwendwele iiklabhu zasebusuku ezadutyulwa yinkundla.
Isicwangciso esibi sabhengezwa ngoMvulo.
Isicwangciso siya kufuna iSatifikethi se-EU Digital COVID, uvavanyo olubi lwe-PCR, okanye uvavanyo lwe-antibody olubi lokundwendwela nayiphi na indawo yasebusuku e-Andalusia.
INkundla ePhakamileyo yezobuLungisa yaseAndalusia (TSJA) yasikhaba isicwangciso esineempikiswano esasifuna ukwenza iipasipoti ze-COVID-19 zinyanzele ukuba zityelele zonke iindawo zasebusuku.
Inkundla ephezulu kwingingqi eselunxwemeni esemazantsi eSpain yagweba ukuba ngokuchasene nesindululo esenziwe ngurhulumente ka Andalusia ekuqaleni kwale veki. Ukwenza ipaspoti yezempilo inyanzelekileyo ukuba ityelele iindawo zasebusuku zangaphakathi kwakuthathwa njengokucalucalulo kwaye kwaphula amalungelo abemi abucala.
Isicwangciso esingalunganga sabhengezwa ngumongameli woburhulumente bengingqi, uJuanma Moreno, ebuyile ngoMvulo. Ngokuka-Moreno, isiQinisekiso se-EU Digital COVID, uvavanyo olubi lwe-PCR, okanye uvavanyo lwe-antibody olubi kuya kufuneka utyelele nayiphi na indawo yasebusuku e-Andalusia.
Ngelixa imilinganiselo kulindeleke ukuba iphunyezwe kwakamsinya nje ngoLwesine, yabanjwa nje emva kosuku emva kokubhengezwa kokuqala. Isibonelelo sangeniswa ukuze siqwalaselwe kwiTSJA, ukufumana “ukhuseleko oluphezulu kwezomthetho” phambi kokunyanzeliswa, ngokukaElias Bendodo, umncedisi omkhulu kumongameli. Isigwebo senkundla esilahlayo sithetha ukuba asizukusebenza kwaphela.
Ngaphezulu kwesifo, iSpain ibhalise iimeko ezingama-4.57 yezigidi zeCovid-19 kunye nokusweleka kwabantu abangama-82,000 ukusukela ngoLwesihlanu. Nangona kunjalo, amazinga osulelo ayahla njengoko ilizwe libonakala ngathi lidlulile kwincopho yokwahluka okuthelelekayo kweDelta.
Kwinyanga ephelileyo, iNkundla yoMgaqo-siseko yaseSpain yagweba ukuba umthetho ongqongqo wokutshixwa-okhutshwe ngurhulumente ophakathi ngexesha lomsinga wokuqala wobhubhane kwi-2020-wawungekho mthethweni.